Akụkọ gam akporo: hapụ, akụkọ, asịrị na ndị ọzọ! | Gam akporo (Peeji nke 37)
Gam akporo 4.4 Kit Kat, ga-ekwe omume ndepụta Samsung ọnụ ga-emelitere ọhụrụ version nke gam akporo
Samsung mechuru anyị ihu ọzọ site na ịhapụ Samsung Galaxy S4.4 mini site na mmelite ndị isi na gam akporo 3 Kit Kat.
Gam akporo 4.4 maka Xperia Z1 na Z Ultra na Jenụwarị, na gam akporo 4.3 na mbụ maka Z, ZR na ZL
Ọnọdụ Z nke Sony Xperia, dị ka nke ọhụrụ Z1, Z Ultra, Z, ZR na ZL, ga-enwe mmelite ha na gam akporo 4.4 KitKat maka mbido afọ.
Google ga egosiputa foto nke profaịlụ Google gị na kọntaktị na-akpọ gị
A ga-eji foto profaịlụ Google+ gị mata nọmba ekwentị mgbe ha kpọrọ gị na ọnwa mbụ nke 2014 na gam akporo 4.4.
Pụrụ iche na gam akporo 4.4 KitKat: Ndakọrịta na ihe mmetụta dị ala na ọrụ iji gụọ usoro
A gam akporo 4.4 KitKat na-eweta ihe omuma di omimi dika ndakọrịta na ihe mmetụta ike nke obere na ịnwe ike ịgụta usoro nke gị.
A gam akporo 4.4 KitKat maka igwe nwere 512MB RAM ekele “Project Svelte”
Android 4.4 KitKat na-agba mbọ itinye onwe ya na ọdụm ndị okenye nwere opekata mpe 512MB nke RAM, ebe ụfọdụ ejirila usoro iheomume rụọ ọrụ.
DotEmu na-ebugharị trilogy dragon abụọ na gam akporo
Ugboro abụọ dragọn, otu n'ime kpochapụwo video egwuregwu igwe n'oge gara aga, ga-abịa gam akporo ekele DotEmu na trilogy na otu aha.
Ihe ọghọm kachasị njọ nke ekwentị na-akpata
Taa iji mee emume mbubata nke Halloween anyị ga-egosi gị ihe ọghọm kachasị egbu egbu nke ekwentị ama na akụkọ ihe mere eme nke telephony.
Samsung Galaxy S3 mini na S4 mini, dị mma karịa ụmụnne ha ndị tọrọ?
Enwere ike ịtụle usoro ndị kacha ọhụrụ nke Samsung kachasị mma karịa Top nso?
Switchr bụ nnukwu ngwa ngwa maka gam akporo
Ihe ngbanwe Switchr ka ịgbanwee n’etiti ngwa ndị na-adịbeghị anya n’ụzọ oke ọhụụ na arụmọrụ mara mma.
Sony na-ekwuputa ngwa maka Playstation 4 gam akporo na iOS
Maka ọnwa na-abịanụ nke ọnwa November, a ga-arụ ọrụ gọọmentị nke PlayStation 13 maka gam akporo na 22th maka North America na nke 4nd na Europe.
Samsung na-agbasa ndozi Galaxy Gear na Galaxy S4, S3, Rịba ama 2 na ndị ọzọ
Site na mmelite ohuru gam akporo 4.3 maka Samsung, otutu ndi ozo gha enwe ike ijikọ ya na Smartphone Gear.
Samsung Galaxy S2 na Galaxy Cheta, goodbye ka ukara Samsung mmelite
Njedebe nke ebube Samsung abụọ dị ebube abatala, Samsung Galaxy S2 na Rịba ama 1 ga-akwụsị ịnweta mmelite ndị ọrụ sitere na Samsung.
Kedu ihe bụ omenala ROM na mgbọrọgwụ?
Omenala ROM bụ maka otu ụdị ndị nwere ihe ọmụma na ịwụnye ha, mana nke nta nke nta ...
Samsung, egbula m akwa na anaghị m ahụ gị!
Samsung na-egosi na ihe kachasị ha bụ ndị ahịa ha ịgbachi ntị na mkpesa niile enwetara banyere esemokwu mpaghara mpaghara.
Nsogbu ndị ọzọ na Samsung Galaxy Note 3
Nsogbu ndị Samsung Galaxy Note 3 na-aga n'ihu, oge a ka ọ na-aga n'ihu n'ihu nke ọnụ.
Samsung Galaxy Round bụ ihe ngosipụta ga - enwekwa ngwaahịa nwere oke
E weere na Galaxy Round dị ka ama iji zoo LG G Flex, mana ọ dị ka ọ ga-adịgide dị ka ihe ngosipụta na enweghị oke.
Sony na-eme ka batrị na igwefoto dịkwuo mma na Xperia Z1 na Z Ultra
Sony ewepụtala ngwa ngwa ọhụụ nke mere ka igwefoto, ndụ batrị na nzaghachi mmetụ nke ihuenyo nke Xperia Z1 na Z Ultra dị mma.
Akara ngosi KitKat 4.4 n'efu
Na ngwụsị izu ahụ, ewepụtara onyonyo nke ikiri na gam akporo KitKat 4.4 interface, dị ka nke ị hụrụ ...
Android 4.4 KitKat ga-enwe ngwa ndabara maka SMS
Iji Android 4.4 KitKat ị nwere ike ịhọrọ otu n'ime ngwa SMS anyị nwere na ndabara iji zipu ma nata ụdị ozi niile a.
Mmiri ozuzo nke nyocha na-ezighi ezi maka Samsung Galaxy Note 3
Nnukwu afọ ojuju sitere n'aka ndị ahịa Samsung gbasara mbido ọhụụ ọhụụ nke Samsung Galaxy Note 3 nke na-anata ịsa ahụ nke nkatọ.
Samsung Galaxy Rịba ama 3, ogbenye oku na-agba na Sprint version
Dabere na ọtụtụ puku ndị ọrụ Sprint, Samsung Galaxy Note 3 ga-enye nnukwu nsogbu ruo n'ókè nke enweghị ike ịkpọ oku.
Fungipedia, ngwa nke ndi choro mycology [Nyocha]
You bu ero na ero ero? Ọ bụrụ otú ahụ, ngwa a ga-amasị gị. Ana m aga taa…
Sony's Pinball Rocks HD na-abịa gam akporo site na ịpị ụbọ akwara
Pinball Rocks HD abịa na gam akporo mgbe ịmechara ya na iOS na-eweta ezigbo egwuregwu Pinball na egwu egwu egwu mara mma.
Nyocha kiiboodu maka Samsung Galaxy Tab 2
Keyboard Mobile Bluetooth mara mma, nke kwesịrị ekwesị maka mbadamba 10-inch, ọ bụ ezie na enwere ike iji ya na ngwaọrụ gam akporo ọ bụla, PC ma ọ bụ Mac.
Gaa na 1998 ekele akwa Google a ga - ehi ụra
Google ga-agbanye (ma ọ bụ tụgharịa, kpọmkwem ụbọchị ọmụmụ ya amachaghị nke ọma) afọ 15 ...
Mata: Mwakpo cyber achọpụtara na ndị ọrụ WhatsApp
N'ehihie a, akụkọ ahụ mebiri usoro mwakpo ọhụrụ na ndị ọrụ WhatsApp, bụ ndị ga-enweta ozi ọjọọ site na email
FIFA 14 Ugbu a na nbudata / Nyocha / nyocha
Taa, anyị ewetara gị Nyocha banyere egwuregwu bọọlụ a dịka Fifa 14
Nwere ike isonye na nkwalite gam akporo KitKat iji merie mbadamba 1000 Nexus 7
Googlebọchị Google kwupụtara ọkwa ọhụrụ nke Android 4.4 KitKat, o gosipụtara nkwalite iji merie 1000 Nexus 7 site na KitKat swiiti ogwe.
fonYou na-enye anyị ohere ị nwere ịnwe nọmba ekwentị mkpanaaka nke abụọ ịnata ma kpọọ oku na mba ofesi n'efu ma ọ bụ na ọnụego belata
Onye ndu oru AOSP nke Android weputara Google maka Yahoo!
Jean-Baptiste Queru, onye isi ọrụ Android AOSP, hapụrụ Google maka Yahoo mgbe nsogbu na ndakọrịta ọkwọ ụgbọ ala.
Nbanye na Gmail na-enweghị paswọọdụ ga-ekwe omume maka na-esote afọ na YubiKey Neo
Google na-ezube imalite YubiKey n’afọ na-abịa, sistemụ ga-enye gị ohere ịbanye na Gmail n’enweghị okwuntughe ma ọ bụ igodo.
Ezigbo mma foto na ọnọdụ ọkụ dị ala site na Sony Xperia Z1
The Xperia Z1 bụ flagship ọhụrụ nke ụlọ ọrụ ndị Japan na foto ndị e mere na ọnọdụ ọkụ dị ala bụ ezigbo mma.
Mmekọrịta ịhụnanya-ịkpọasị Twitter na ndị mmepe ngwa nke atọ
Mmekọrịta dị iche nke Twitter gosipụtara na ndị mmepe ndị ahịa Twitter bụ ihe pụrụ iche dịka ọ dị na Falcon Pro na Tweet Lanes.
Gam akporo 4.4 Kit Kat ụfọdụ atụmatụ na o kwere omume tọhapụ ụbọchị
Omume ụbọchị ịhapụ nke ụdị ọhụrụ nke gam akporo 4.4 Kit Kat na ntanye nke ụfọdụ atụmatụ ọhụrụ ya.
Ngwa 5 kachasị mma iji chọta ọrụ
Anyị ahọrọla 5 kachasị mma maka ịchọta ọrụ na Spain. Site na ịpị aka dị mfe anyị ga-eziga usoro ọmụmụ anyị na onye ọ bụla anyị chọrọ.
Samsung na-eme ka ọ ghara ikwe omume ịlaghachi na nke gara aga site na iji ngwa ọhụụ ọhụrụ nke Galaxy S4
Na ọhụrụ S4 firmwares, Samsung na-eme ka ọ ghara ikwe omume ịlaghachi na nke gara aga iji nwee bootloader nke na-enye ohere mfe mgbọrọgwụ
Nkọwapụta teknụzụ na onyonyo nke Samsung Galaxy Gear
Ihe ijuanya nke Galaxy Gear emeela ka ọdịdị ya gosipụta onwe ya dị ka ụzọ zuru oke iji soro onye ọ bụla Samsung Companion.
Nkesa nke ụdị Android maka Septemba: Jelii agwa na-etolite
Data nke nkesa nke nsụgharị dị iche iche nke gam akporo apụtawo ụnyaahụ, ma chekwaa jelii agwa dị ka mbipute ahụ toro.
AntTek, ihe ngbanye ugwu na ihe nchọgharị faịlụ na ọtụtụ arụmọrụ
AntTek bụ nnukwu ihe nchọgharị faili faịlụ n'efu, dị maka nbudata ozugbo site n'aka nri ebe a ma ọ bụ site na ndị mmepe XDA.
Na akwụkwọ ahụ aja nke niile na nsụgharị nke gam akporo
A google na ọtụtụ ndị ọrụ anọwo na-elekọta ime niile na akwụkwọ ahụ aja nke gam akporo nsụgharị dị ka gam akporo obodo.
Samsung kwuputara nkwekọrịta ya na Lookout ka iwekota antivirus na ọdụ ya
Samsung na Lookout eruola nkwekọrịta iji tinye antivirus ha na njedebe nke ụlọ ọrụ Korea ma si otú a chebe ha karịa.
Ihe osise sụgharịrị nke Sony Xperia Z1
Xperia Z1 ga-apụta n'echi ya na IFA, ngosi ngosi kwa afọ na Berlin na nke ga-ebutu ọdụ dị iche iche.
Google mechiri ụzọ iji kpọọ ọdịnaya mpaghara site na ChromeCast
Google achọghị ngwaahịa Chromecast ọhụrụ ya igwu egwu nke ya site na ngwa dịka Aircast. Mmelite emechiela usoro ahụ.
«« Robo Taxi »bu oru ohuru nke Google
Ọ ga-abụ ọrụ siri ike ịme, mana Google abanyelarị na onye isi ụgbọ ala mepụtara "Robo Taxi"
Akụkọ banyere gam akporo: Oge igodo dị ukwuu
Site na okike nke ụlọ ọrụ gam akporo ọ bụla na iwebata 4.3, ọtụtụ ihe mere na anyị na-akọ na akụkọ ihe mere eme nke gam akporo.
Egosiputa nkọwa MHL 3.0 na-akwado 4K Video
Mkpụrụ MHL gụnyere nsụgharị ọhụrụ, 3.0 nwere ike ịme vidiyo 4K (Ultra HD) ma jiri akụkụ dị ka keyboards ma ọ bụ ụmụ oke.
Samsung Galaxy 2 TV, a ama na mpi na-ekiri telivishọn
Samsung ka webatara Samsung Galaxy 2 TV, gam akporo ama nwere wuru na antenna nke na-enye gị ohere ile onyonyo. A ga-ewepụta ya naanị na Brazil.
Gam akporo maka Dummies: mmalite nke gam akporo
N'isiokwu a anyị kọwara otu gam akporo si bido, sistemụ arụmọrụ kacha eji n'ụwa
Google chepụtara mgbanwe nke sistemụ nchekwa gam akporo: .kpụrụ
Patternkpụrụ ahụ bụ usoro nchebe (njedebe mkpọchi) dị irè. Google nchoputa ihe di iche na inweta ochichi na ngwa.
Ikea bidoro katalọgụ kọmpụta 2014 ya na eziokwu adịwanye elu
Firmlọ ọrụ Sweden Ikea na-enye anyị katalọgụ kọmputa elektrọnik ọhụrụ ya nke ejiri mee ka eziokwu dịwanye elu iji hụchalụ isiokwu na ọnọdụ ikpeazụ.
Onye injinia Google na-akọwa ọkwa na-adịgide adịgide na gam akporo 4.3
Onye injinia Google akọwaala ihe kpatara ọkwa na-adịgide adịgide nke ụfọdụ ngwa na-anọgide na ndabere na gam akporo 4.3
Ihe niile gbasara gam akporo 4.3
Android 4.3 emesịa pụta ma ugbua niile Nexus ngwaọrụ na-emelite. Anyị na-agwa gị ihe niile gbasara ụdị gam akporo ọhụrụ.
Android 4.3 bụ ebe a
Na mmemme Google emepụtara taa, ụdị ọhụrụ nke gam akporo 4.3 pụtara na nkwado maka ọtụtụ ndị ọrụ nwere profaịlụ amachibidoro.
Onye isi ụlọ ọrụ Nokia bụ Stephen Elop kọwara ihe mere ha jiri họrọ Windows Phone
Onye isi ụlọ ọrụ Nokia bụ Stephen Elop kọwara ihe mere ndị ụlọ ọrụ Finnish ji họrọ Windows Phone karịa gam akporo dị ka sistemụ arụmọrụ maka ekwentị ya.
Ọhụrụ Google Play Web
The ozi ọma nke ụbọchị na ọtụtụ ndị ọzọ bụ doro anya na zuru ezu redesign nke Google Play website….
Mgbanwe niile emere na ntanetị nke Google Play
Mmelite na nsụgharị weebụ nke Google Play, nwere ọmarịcha ọhụụ mara mma na mkpochapụ ụfọdụ ọrụ dị mkpa.
SanDisk weputara kaadi microSDXC 64GB nke kachasi n’ụwa
Famed kaadị ebe nchekwa ika SanDisk atụmatụ ndị kasị microSDXC na mbara ala na 80MB / sec na-agụ na 50MB / sec dee gbapụrụ ọsọ.
Ndụmọdụ gam akporo (III): Securityzọ nchekwa dị irè
Gam akporo nchedo bụ ihe dị mkpa na ya mere na ọ nwere ụzọ dị iche iche iji chebe ọnụ: PIN, Paswọdu, Nlereanya na Face Kpọghe
2 gbanwere Galaxy Note na 288GB nchekwa na batrị 9300mAh
Onye ọrụ agbanweela 2 Galaxy Note ya site na ịgbakwunye batrị 288GB na batrị 9300mAh, na-echefu kpamkpam gbasara aesthetics.
«Priyanka» na-eji ahụhụ na WhatsApp iji gbanwee aha ndị otu na kọntaktị gị
Priyanka ga-agbanwe aha otu niile na ọbụla kọntaktị gị, ọ bụrụ na ị tinye ya na listi gị mgbe ọ pụtara dị ka faịlụ dị na ozi.
Ihe ndozi Gorilla na-esote ga-abụ mgbochi na nje
Mgbochi ngosiputa na mgbochi nje bụ ebe Gorilla Glass tinyewo uche ya na ihu igwe emere maka afọ abụọ site ugbu a.
Cyanogenmod na-arụ ọrụ na TextSecure na ngwa izi ozi ezoro ezo maka gam akporo na iOS
Ebumnuche nke CyanogenMod na TextSecure bụ imepụta ngwa cross-platform maka iOS na gam akporo iji kpuchido nzuzo anyị na ozi anyị.
Iji Google Maps rụkọta ọrụ site na ịbụ onye na-esote Street View Trekker
Street View Trekker na akpa gị, ụzọ dị n'akụkụ ụfọdụ iji cheta na foto akpaka ga-elekọta inye onyinye onyonyo na Google Maps.
Nsogbu nke antivirus adịgboroja na gam akporo
Na Storelọ Ahịa Play enwere ọtụtụ mmemme antivirus adịgboroja nke na-etinye malware n'ime sistemụ arụmọrụ, nke n'aka nke ya na-akpata nhazi usoro.
Samsung Galaxy Note 8 bụ ngwakọ ngwakọ na-adịbeghị anya (smartphone na mbadamba) nke nwere ezigbo atụmatụ dị elu n'etiti etiti.
Echiche mara mma na Street Street site na ụlọ kachasị elu na mbara ala, Burj Khalifa
Google eweputala site na blọọgụ ya foto ọhụụ ọhụrụ sitere na Burj Khalifa, were ya na ngwa ọhụụ ọhụụ ọhụụ nke ruru ebe a na-anụbeghị.
Ngwa 5 kachasị mma iji were osimiri
N'oge ọkọchị ọ bụla na-abịa, anyị na-ajụ onwe anyị ihe anyị ga-aga n'akụkụ osimiri: nche anwụ, nchebe ... Kedu ngwa anyị ga-eji gaa n'akụkụ osimiri na njedebe Android anyị?
HP Slate 21: gam akporo nwere Tegra 4 na nnukwu ihuenyo 21.5-inch
HP na-aga n'ihu na-eji ngwaọrụ ọhụrụ nwere sistemụ arụmọrụ gam akporo yana ịgbasa akara nke ngwaọrụ ọ nwere, oge a na HP Slate 21.
44 Google Ugbu a na akwụkwọ ahụ aja n'ihi na gị gam akporo
Otu onye ọrụ chịkọtara 44 Google Ugbu a na akwụkwọ ahụ aja, si ya Google+ ị nwere ike ibudata ha ma nye Google Ugbu a aka gị gam akporo.
Akụkọ banyere interface HOLO
Izu a ederela m akụkụ nke mmalite nke gam akporo, site na onyonyo ya rue ntoputa nke nsụgharị ya na ...
Mmalite nke Andy, gam akporo robot
Anyị nwere ya na ekwentị anyị, na logos nke blọọgụ anyị na-agụkarị, na atụdo, ụmụ bebi USB, anụmanụ jupụtara, akwụkwọ mmado ...
Ọrụ Loon chọrọ iji nweta ịntanetị na mpaghara ndị dịpụrụ adịpụ
Na New Zealand, a na-anwale Loon Project iji kpuchie ime obodo ma ọ bụ mpaghara ndị na-enwetụbeghị ohere ịntanetị.
Ezigbo agha n'etiti ọgba tum tum ọkpọ maka CloudRobot
Igwe igwe egwu bọọlụ igwe ojii na-apụta na E3, mgbakọ egwuregwu egwuregwu vidiyo kachasị mkpa nke ụlọ ọrụ ahụ. Na-alụ ọgụ n’etiti ezigbo ígwè ọrụ ịkụ ọkpọ.
Samsung Galaxy S4 na Qualcomm Snapdragon 800 chọpụtara na weebụsaịtị AnTuTu benchmarks
Ọdịiche ọhụrụ nke Galaxy S4 nwere mgbawa na-eme ka ọ bụrụ otu n'ime smartphones kachasị ike na ahịa, mana ọ kachasị ruo ugbu a.
Intel na-akwado, Atom Z2560 processor dị na Samsung Galaxy Tab 3 10.1
N'ụtụtụ a, Intel ekwenyela na mgbawa Atom Z2560 ga-apụta na-arụ ọrụ na Samsung Galaxy Tab 3 10.1, na-adị n'oge nke ọnwa a.
Acer na-ekwupụta Liquid S1, ama dị 5.7-inch dị n'etiti
Ọ bụrụ n'ịchọrọ inwe gam akporo na jelii agwa na nnukwu ihuenyo 5.7-inch, Acer's Liquid S1 nwere ike ịbụ ekwentị gị ọzọ.
Gbanyụọ nyocha faịlụ ọjọọ na Google Chrome
You maara na Google Chrome na-enyocha faịlụ niile anyị na-ebudata iji chọpụta ma ha nwere faịlụ ọ bụla nwere obi ọjọọ? ...
Isi mmalite gosi na Sony Xperia L4 “Togari” phablet nwere 6.44 ″ ihuenyo, Full HD na stylus
Asịrị apụta ọzọ na Sony ọhụrụ Phablet, nke Xperia L4 "Togari", na ụfọdụ n'ezie pụtara ìhè nkọwa.
Ihe ngosi akara ohuru nke GT-I9600 ụfọdụ, Samsung Galaxy S4 gbakwunyere na-egosi?
A ọhụrụ Samsung ọnụ nlereanya mysteriously-egosi na a benchmark leaked ka media, codename GT-I9600, -ekwe omume Samsung Galaxy S4 Plus?
Samsung na-eme kernel koodu maka Verizon Galaxy S4, Tab 3 7.0, Mega 5.8 na Mega 6.3
Samsung ewepụtala kernel mepere emepe maka Galaxy S4 dị iche iche, Tab 3, na Mega, mepee ngwaọrụ ndị a maka obodo iji mepụta ROM ha.
Aluminom ikpe na Bluetooth keyboard, ngwa zuru oke maka Nexus 7
Site na MobileFun, ha na-ewetara anyị ngwa a zuru oke iji zuo ezu Nexus 7, ikpe na blọtọ blọtọ 3.0 XNUMX nwere atụmatụ aluminium mara mma.
Samsung ewepụtala Samsung Galaxy Note 10.1 ka ya na Apple's iPad nwee mpi. Ekele maka atụmatụ ya na Stylus ya, mbadamba a ga-enye onwe ya ọtụtụ.
Samsung Galaxy S3 mini Nyochaa
Nnyocha vidiyo nke Samsung Galaxy S3 mini model GT-I8190 ekele Samsung Spain
Nyochaa Samsung Galaxy S3 nlereanya GT-I9300
Nyochaa nke Samsung Galaxy S3 nlereanya GT-I9300 ekele site n'ikike nke Samsung Spain.
Daniel Hughes, onye nyocha Britain na-eme oku vidiyo mbụ site n'elu Ugwu Everest
Daniel Hughes mere oku vidiyo nke mbụ site na elu ugwu Everest na ebumnuche ya iru otu nde pound maka nzukọ Comic Relief
Samsung Galaxy S4, Samsung kwere nkwa ịhapụ ebe nchekwa dị n'ime
Mgbe ụfọdụ, ịdị n'otu na-adị ike, yana dịka nke a, mkpesa banyere oke ọrụ nke ebe nchekwa nke Samsung Galaxy S4 eruola Samsung
Igodo uzo uzo bu uzo di nma na ngwa Google
Ogwe Ntugharị Ọhụrụ ọhụụ hụrụ na Google Earth na Currents ruo ọtụtụ ụbọchị na site na Androidsis anyị tụlere, bụ onye ọchịchị ugbu a.
New data si Tapjoy na gam akporo ahịa òkè, Samsung na-achịkwa
Ihe omuma ohuru sitere na Tapjoy egosi Samsung na-achi ahia gam akporo, na ebe enwere agha di egwu n’etiti Lg, Sony na Htc maka ebe nke abuo.
New Android boss Sundar Pichai na-ekpughe atụmatụ maka OS kachasị ewu ewu n'ụwa
Onye isi ọhụụ gam akporo Sundar Pichai na-ekpughe atụmatụ ọhụụ nke gam akporo maka afọ ole na ole sochirinụ ma kwupụta onye nrụpụta I / O 2013 mepụtara
Samsung SideSync egosi na ya zuru nwere na video
Samsung ebipụtala vidiyo SideSync nke anyị ga-ahụ ohere niile nke sọftụwia ọhụrụ nke onye nrụpụta Korea
Nhazi usoro uzo ozo nke Google bu ugbua
Google kpogidere ya na ogwe igodo ohuru nke eweputara na mmelite ohuru ohuru, na-eme ya ka odi nma maka ngwa ya.
Android na-ebibi Apple na Microsoft na ahịa ngwaọrụ mkpanaka
Na nkeji iri na ise nke afọ a 2013, gam akporo na-ebibi ndị ya ozugbo, Apple na Microsoft. inweta oke ahia nke 59.5%
Samsung Galaxy S4, ụfọdụ ntụpọ achọtara
More nsogbu na flaws na Samsung Galaxy S4, a oge ewepụtụ na gburugburu 5 "ihuenyo
Samsung Galaxy Rịba ama 3 na 3GB nke Ram?
New asịrị na-egosi na mwepụta nke a ọhụrụ Samsung Galaxy Cheta 3 na 3 GB nke Ram.
ZoomBoard, kiiboodu maka obere ntanye
Otu nyocha a na Mahadum Carnegie Mellon dị na Pennsylvania emeela kiiboodu, ZoomBoard, maka ojiji na obere enyo.
IMH79 Obere okwu
Anyị na-ewetara gị nyocha nke ndị ọkà okwu mkpanaka iHM79, site n'ikike nke LeTrendy.
Ebe ịzụta Samsung Galaxy S4 na Spain
Samsung Galaxy S4 dị ebe a. Echi, Eprel 27, a ga-ere ọkọlọtọ ọhụrụ ...
Sony gosipụtara ọhụụ ọrụ ọhụrụ ya, Sony Xperia Z. Ngwaọrụ nwere arụmọrụ dị egwu yana nke ahụ gosipụtara maka iguzogide mmiri na ájá.
Samsung chọrọ ịnọgide na-achịkwa ahịa phablet na Samsung Galaxy Note 2, ngwaọrụ nwere oke egwu.
Samsung Galaxy S3 Obere
Samsung gosipụtara Samsung Galaxy S3 Mini, nwanne nwoke nke obere nke S3, nwere otu atụmatụ ahụ mana atụmatụ dị ala, dịka onye nhazi ya nwere dual-core.
Koodu nke Samsung website nwere data sitere na Samsung Galaxy S4 Mini
Achọpụtara site na Samsung si koodu isi, achọtara aha GT-I9190 ahụ. O yikarịrị ka aha Samsung Galaxy S4 Mini.
Biko Nọrọ jụụ, zombie MMORPG
Biko Nọrọ Calm bụ MMORPG nke si n'aka Mobage: zombies na ụwa post-apocalyptic.
Apple ga-akwụ $ 53 nde maka mmebi nke ikike na ngwaahịa ya
Apple ga-akwụ $ 53 nde na ọtụtụ puku ndị ọrụ ọ gọrọ mmezi-ezighi ezi ebubo nke mmiri ha ngwaọrụ.
Google Play emelitere na interface ọhụrụ
Google eweputara mmelite kachasị ọhụrụ na Google Play, nke ga-abata na ngwaọrụ nwere gam akporo 2.2 ma ọ bụ karịa na izu ndị na-abịanụ.
Review: Urbanears Plattan Black ekweisi
Nchịkọta nke ekweisi ekweisi Black Urbanears Plattan nke letrendy.com nyere, weebụsaịtị wepụtara maka ngwa maka ekwentị mkpanaaka.
Anyị na-achọ ndị edemede maka Androidsis
Anyị na-achọ ndị edemede ọhụụ ka ha mezue otu nchịkọta akụkọ nke blog. Ruo oge ụfọdụ, anyị na-ahapụ akụkọ na ...
Igwefoto Sony nwere nkọwa ka mma karịa Samsung Camera
Sony nwere ike iweta igwefoto ya 20 Mpx na asọmpi Samsung maka ekeresimesi.
LG Optimus G ga-abụ ọkwa ọrụ ọhụụ nke nnukwu onye Korea nke na-ezube ịlụ ọgụ maka ahịa dị elu na ama a dị egwu.
Samsung Galaxy S4 napụrụ ahịa ya tupu ọ gaa ire ere.
Mkpebi dị ịtụnanya nke Supremelọikpe Kasị Elu nke United States nke America amachibidoro ire Samsung Galaxy S4 ọhụrụ.
Ọnọdụ Galaxy bụ ọgazị ọla edo nke Samsung na ahịa ama. Na Samsung Galaxy S3 ọrụ gị.
Neo N003, ekwentị ndị dị elu kwupụtara maka Eprel
Neo N003 bụ phablet dị elu nke a ga-ewepụta na China na Eprel.
Samsung Galaxy S4, gịnị mere ịhọrọ ya n'etiti ọtụtụ ụdị?
Edepụtara Samsung Galaxy S4 dị ka otu n'ime ngwaọrụ mkpanaka kachasị mma n'oge a, mana nke a ọ bụ eziokwu n'ezie?
Samsung Galaxy S4, nke a ga-abụ gị wireless Nchaji usoro
Photographfọdụ foto ka edozila na nke anyị nwere ike ịhụ mkpuchi azụ nke Samsung Galaxy S4, na mgbakwunye na ntọala ikuku wireless ọhụrụ.
Huawei Ascend G700 nwere ike ịbụ nchikọta nke ụdị gara aga
Mwepụta nke Huawei Ascend G700 na China bụ ihe ọhụrụ dị ugbu a nke ụlọ ọrụ ahụ, ihe atụ a na-ekwu na a ga-agbakọta site na nke gara aga.
Sony Xperia Z na emelitere iji zere ọnwụ mberede
Sony eweputara mmelite iji zere ọnwụ mberede nke na-eme na ọkọlọtọ ọhụrụ ya Sony Xperia Z, lee ị nwere azịza ya
Samsung Galaxy S4 obere nkọwapụta pụtara na ozi Twitter
Ejirila Samsung Galaxy S4 mini site na ozi Twitter yana nkọwa onyonyo njikọta.
Emechara gosiputa ọnụahịa nke Huawei Ascend Mate 6.1
Awa ole na ole gara aga mara ọkwa na ọnụahịa gọọmentị nke Huawei Ascend Mate 6.1 ga-abụ $ 430.
Nexus 4 ma ọ bụ Samsung Galaxy S4? mgbe ọ na-abịa ịhọrọ nke ọma
A obere ntụnyere mere n'etiti Samsung Galaxy S4 na Nexus 4 nwere ike inyere anyị aka ikpebi nke ị ga-aga n'ụlọ.
Samsung Galaxy S4 bụ ama ọhụrụ nke akara Korea. Ọnụ nke nwere nnukwu mgbanwe na ngwanrọ na ngwa.
Mgbaaka Jawbone dị ugbu a na gam akporo
Jawbone bụ mgbaaka na-adọrọ mmasị nke nwere ikike ịlele ọrụ anyị kwa ụbọchị nke ngwaọrụ mkpanaka anyị kwadoro.
Me Samsung Galaxy S4 nwere ike iburu $ 236 n'otu n'otu
Nyocha zuru oke na-akọwapụta imepụta Samsung Galaxy S4 nwere ike ịnọchite anya uru dollar 236 ọ bụla.
Samsung Galaxy S3 na-ere 49.99 US.D. na Radio Shack
N'okpuru ọnọdụ ụfọdụ nke Radio Shack tụpụtara, ụlọ ahịa ahụ na-enye ịre ahịa na-acha anụnụ anụnụ Samsung Galaxy S3 maka 49.99 US.D.
Kedu maka ụdị nke Samsung Galaxy S4 na SnapDragon 600?
United States na Canada ga-abụ otu n'ime mba ebe Samsung Galaxy S4 nwere ihe nhazi Snapdragon 600 ga-adị.
Samsung Galaxy S4 pụtara na euro 699 maka ọrịre
Site na onyonyo nke ụlọ ahịa ndị Italy bipụtara ọ marala na Samsung Galaxy S4 ga-ere ya maka euro 699.
Apple iPhone 5 na-enwe ihe mgbawa anọ
Apple iPhone 5 asịrị na ọ nwere ihe mgbawa anọ na-esochi ya mgbe ọ kwụsịrị ịkpọ oku ekwentị.
Site n'aka ruo ite, ule ntachi obi maka Sony Xperia Z
E webatara Sony Xperia Z na elekere nke esi nri iji sie ya na ihe ndị dị na ya dị ka nnwale ntachi obi.
Samsung Galaxy S4 nwere ike inwe igwefoto 3D
N'oge na-adịghị anya mgbe mmalite nke Samsung Galaxy S4, a kpọtụrụ aha ọnụnọ nke 3D kamera patent maka ekwentị mkpanaaka.
Ọhụrụ onyonyo nke Samsung Galaxy S4 awa ole na ole mgbe ọ malitere
Tupu mmalite nke ọrụ ahụ maka Samsung Galaxy S4, e gosipụtara onyinyo dị inyoghi inyo nke ọkọlọtọ ụlọ ọrụ ahụ.
Samsung Galaxy S3 ngwa, ụgbọ ala ugwu
Anyị enweela ike ịnwale otu ngwa Samsung Galaxy S3, ihe njide ụgbọ ala Letendry nwere ngwụcha na arụmọrụ ga-eme ka anyị nwee ọ enjoyụ.
Ogbugbu, jiri ama gị ma ọ bụ mbadamba nkume na-emerụ onwe gị ahụ
Iji zere mmerụ ahụ site na iji ngwa anyị, Gesture mụrụ, oche ebubere iji ekwentị ma ọ bụ mbadamba anyị na-enweghị nchegbu gbasara ahụike anyị.
Dịka iwu nke Jenụwarị 23 nke afọ a 2013, ịkpọghe ekwentị mkpanaaka iji ụlọ ọrụ ọzọ dị iche na nke mbụ wee bụrụ omume megidere iwu
Gam akporo igwe ifriizi iji nweta ezoro ezo data
Ndị nyocha German atọ si Mahadum Friedrich-Alexander (FAU) achọpụtala na mgbe oyi gam akporo gam akporo ị nwere ike ịnweta ...
Ihe nzuzo dị na igwe okwu nke HTC One mgbe ị na-edekọ ụda
Ọnụnọ nke okpukpu abụọ nke igwe okwu nke HTC One ga-enye ụda olu kwesịrị ntụkwasị obi na gburugburu ebe ọ bụla na gburugburu ebe anyị na--
Ndi ana-akpo +, ngwa efu jikwaa kọntaktị gị
Ndi ana-akpo + bụ ngwa na-akwụ ụgwọ n'efu yana dị na Storelọ Ahịa Play nke anyị ga-eji melite njikwa nke kọntaktị anyị.
Vidiyo na-egosi otu esi ewu HTC One
Vidio na-adọrọ mmasị na-egosi njupụta na nraranye nke enyere HTC One, ihe ga-ewe nkeji 200 na mkpokọta.
Ihe ngwọta kachasị mma iji chekwaa Samsung Galaxy S3 gị na ọnwụ mberede nke na-atụ ụjọ
O yiri ka nsogbu nke ọnwụ mberede na Samsung Galaxy S3 adịghị edozi, n'okpuru anyị na-akọwa otu esi belata mmetụta ya
Samsung Galaxy S4, Anya Ndepụta na-atụgharị Peeji?
A ọhụrụ ọrụ nke Samsung Galaxy S4 dị nnọọ leaked ke ụma ukara ụzọ, na ọbụna ma ọ bụrụ na ọ bụ nanị asịrị ọ na-amalite iji nweta ike.
Ime anwansi wuru n'ihu igwefoto nke Samsung Galaxy S4
Maka ọtụtụ mmadụ ọ bụ anwansi, mana n'eziokwu ọ bụ teknụzụ dị elu etinyere na Samsung Galaxy S4 yana nsuso ya na igwefoto n'ihu.
MWC 2013, New Samsung ụdị maka European ahịa
Na MWC 2013 emechara na nso nso a, anyị nwere ike ịhụ usoro Samsung nke dị n'etiti etiti ga-ebido ọnwa a na ahịa Europe.
Na-akpali ekwentị mkpanaaka E-Ink ọkọnọ ke MWC 2013
E-Ink bụ ekwentị eji akụ na ụba nke egosiri na ngosi MWC 2013 na uru nke naanị dollar 50, ịbụ ndị dị ọnụ ala na ahịa.
Vidio nke Samsung Multitasking gosipụtara na MWC 2013
N'iji Samsung Grand na ngosipụta MWC 2013, arụmọrụ na ịba uru nke inwe ike ịrụ ọrụ ọtụtụ ọrụ na ekwentị ha gosipụtara.
MWC 2013, Huawei Ascend G350, ama ama ama na-apụ apụ
Huawei enyela mpempe akwụkwọ na MWC 2013 ya na Huawei Ascend G350, ama na - enweghị mmiri na - enye foto na vidiyo ka ewere ha n’okpuru mmiri.
MWC 2013, na-anwale Huawei Ascend P2
Site na Androidsis anyị anwalela Huawei Ascend P2 na, ọ bụ ezie na anyị enweela mmechuihu na nhichapụ plastik ya, n'ime anụ ọhịa nwere ike isi ike.
MWC 2013, ha gosiri anyị LG Optimus Vu 2
Ebe ọ bụ na MWC 2013 emere na Barcelona anyị nwere ike ịnwale LG Optimus Vu 2 na nwa afọ LG Vu Talk ngwa.
MWC 2013, LG Optimus G, anụ ọhịa LG
LG na-atụfu ụlọ ahụ na windo. Nnukwu onye Korea ahụ egosila LG Optimus G, ụlọ ọrụ ọhụrụ nke ụlọ ọrụ ahụ ga-abata na Spain n'oge na-adịghị anya
MWC 2013, Sony na-akwadebe ngwa ngwa Play Station 4 maka gam akporo na iOS
Sony na-akwadebe ngwa maka gam akporo na iOS nke anyị nwere ike igwu egwuregwu ozugbo na ama ma ọ bụ mbadamba anyị.
MWC 2013, Geeksphone gosipụtara ekwentị abụọ na firefox OS
Geeksphone siri ike na sistemụ arụmọrụ ọhụrụ nke Mozilla, Firefox OS na MWC 2013 ọ ga-eweta ekwentị ọhụrụ abụọ.
Alcatel iji gosipụta ekwentị ọhụrụ ọhụrụ na MWC 2013
Alcatel dị na ngosi ngosi nke Barcelona nwere ụdị ekwentị abụọ, otu dị elu na nke ọzọ dị ala.
A ẹdụkpụrụ oyiyi nke HTC M7-egosi na nwa
Na onyonyo nke HTC M7 na oji na ọcha, ọ na-atụ aro mbido ọrụ ya maka ọbịbịa nke a na-abịa na February 19 na London na New York.
Gamestick - ihe egwuregwu vidiyo ọhụrụ maka gam akporo
Gamestick bụ njikwa na njikwa egwuregwu vidiyo n'otu oge, nke raara onwe ya nye maka gam akporo.
Sony Xperia ZL ga-ere ahịa na Eprel na Canada
Site na nkọwa ndị na-adọrọ mmasị, a ga-egosi Sony Xperia ZL na Canada maka ọnwa nke Eprel.
Vertu Ti - ekwentị mkpanaaka, 7900 na ahịa
A kwadoro nke a n'ụzọ ziri ezi na euro 7900 iji kwụọ ụgwọ maka Vertu Ti a, nke nwere mmewere na-eme ka ọ bụrụ ihe kachasị ọnụ n'ụwa.
LG na ihe ijuanya maka MWC 2013
LG ụlọ ọrụ ịtụnanya na ọtụtụ ọkwa na ngwaọrụ ndị ga-ekwu ugbu a na Barcelona n'oge MWC 2013
Android 4.2.2 na-amalite ịbata site na OTA na Nexus
Anyị enweelarịrị ụdị ọhụrụ nke sistemụ mkpanaka Google, gam akporo 4.2.2, nke na-eweta mmezi na nchinchi dị iche na naanị 50 Mb.
Bq Aquaris, isi okpukpu abụọ nke imepụta Spanish
Bq, ulo oru puru iche na mbadamba na e-akwukwo, choro ime ka nnukwu oba ahu di na ama smartphone na Bq Aquaris, ya na ihe nhazi abuo.
WindowsAndroid: bestzọ kachasị mma iji gam akporo na PC gị
Enwere otutu ụzọ iji agba ọsọ gam akporo na Windows. Anyị nwere ike ịkpọ BlueStacks, Android x86, SDK emulator na ọtụtụ ndị ọzọ, ...
New gam akporo 4.2.2 melite na-abịa
Ekwenyere na na izu ndị na-abịanụ Google nwere ike ịga n'ihu imelite site na OTA gaa na ụdị Android 4.2.2
Samsung Galaxy S4 ga-mpụta mbụ pixel technology
Ekwentị ọhụrụ Samsung Galaxy S4 ga - amalite izipu ọhụụ ọhụụ ọhụụ
LifeKraze, netwọkụ mmekọrịta na-adabere n'ihe mgbaru ọsọ na ebumnuche onwe onye
Ọhụrụ rutere na Playlọ Ahịa Google, LifeKraze netwọkụ mmekọrịta na-enwe ihe ịga nke ọma na ịkekọrịta ebumnuche na ebumnuche dị iche n'etiti ndị ọrụ ndị ọzọ.
Sony Xperia Togari, nwere ihuenyo 6.44 nke anụ ọhịa FullHD
Foto ahụ gbapụrụ ụbọchị ole na ole gara aga nwere ike ịbụ nke Sony Xperia Togari, anụ ọhịa ọhụrụ nke Sony nke ụlọ ọrụ Japan chọrọ iji na-achịkwa ahịa ahụ.
Motorola DROID RAZR M na-atụ anya Valentbọchị Valentine
Onye ọrụ Verizon ga-ebupụta mbipụta pink nke Motorola DROID RAZR M na Jenụwarị 24 dị ka nhụchalụ nke ụbọchị Valentine.
Have nwere 5 nkeji iji kpokọta Sony Xperia Z
Ihe vidio YouTube na-adọrọ mmasị na-egosi anyị otu esi agbakọta Sony Xperia Z naanị na nkeji 5.
Google kwadoro nkwuputa maka ọkpụkpọ ọdịyo site na Bluetooth A2DP maka ụdị nke gam akporo 4.2 na-esote
Ọ bụ ezie na gam akporo 4.2 wetara ọtụtụ mmụba, ọ wetara oke nsogbu ya na ikpo okwu. N'ime ha, nwere ...
Samsung Galaxy S usoro gafere 100 nde nkeji rere
Samsung Galaxy S abịala ọnụ ọgụgụ nke otu nde nkeji rere ugbu a.
Moga Pro - Ihe njikwa gam akporo ọhụụ
Na Moga Pro a na-enye ya iji nwee ike ịmekọrịta ihe nke ọma na egwuregwu vidiyo vidiyo gam akporo yana site na njikọta Bluetooth.
Tactus atụmatụ ihe ịtụnanya keyboard
Companylọ ọrụ Tactus gosipụtara teknụzụ ọhụụ maka ihe mmetụ mmetụ nke na-achọ iulateomi mmetụta nke ịpị ihe na keyboard
Android: Nyochaa nke 2012 na ọtụtụ atụmatụ ọhụrụ maka 2013
Ihe kariri otu ụzọ n'ụzọ atọ nke Jenụwarị 2013 agafeela, na Google ọ dị ka ezigbo ohere iji ...
Qualcomm na - eweputa ihe nhazi ya ohuru Snapdragon 800 na 600
Qualcomm gosipụtarala Snapdragon 800 ọhụrụ ya na Snapdragon 600 ndị na - arụ ọrụ ya, ya na arụmọrụ na ike ahụtụbeghị mbụ.
Agha agha agha: uhie na-ekpo ọkụ
Ruo ọtụtụ iri afọ, ụlọ ọrụ dị iche iche na teknụzụ agbawala, naanị otu apụtakwa na isi ya dị elu….
Samsung Galaxy S3 mini na Android 4.1.2 na-ere ere
Akụkọ ndị na-adịbeghị anya kwuru na Samsung Galaxy S3 mini nọ n'ahịa ọzọ mana yana Android 4.1.2 na ọnụahịa nke euro 400.
Galaxy S4 - tingchacha teknụzụ maka 2013 na vidiyo
Vidio nke Samsung Galaxy S4 pụtara na-ekwu banyere nkọwapụta dị egwu nke kacha mma na teknụzụ maka afọ 2013.
Nwa ojii Samsung Galaxy Note 2 ga-amasị gị? O doro anya na nke ahụ agaghịzi ekwe omume
Asịrị ahụ kwuru na ojii 2 Galaxy Note bụ ụgha, ebe ọ bụ na onyonyo ya bụ ụdị dị mfe nke onye ọrụ na-amaghị aha ya mere.
Ihe nrịba ama nke 10 nke afọ 2012 na ụwa gam akporo
Gam akporo hapụrụ anyị ọtụtụ ihe ịtụnanya n’afọ a 2012. Site na Androidsis anyị ekpebiela inyocha isi ihe dị mkpa nke ngalaba na-eto eto oge niile.
Odabara nke mobile technology na-amalite ụgbọ ala
Hyundai ga-eweta ụgbọ ala na 2015 nwere ike ịmalite (ma ọ bụ kpọchie ya ma ọ bụrụ na ị zuru ohi) site na iji teknụzụ mkpanaka NFC.
Samsung Galaxy S4 nwere ike ime ka ọnụnọ ya na Eprel na S-Pen
Emepụtara asịrị ọhụrụ na nso nso a, ebe ekwuru na Samsung Galaxy S4 ga-esonyere ya na S-Pen maka ọnwa Eprel.
Vidio gosipụtara na Sony Xperia TL emelitere na gam akporo 4.1.2
Vidio na-adọrọ mmasị na-egosi arụmọrụ nke Sony Xperia TL na gam akporo 4.1.2 tupu njikwa arụmọrụ ya.
GT-i9500 nwere ike ịbụ aha njirimara maka Samsung Galaxy S4
A usoro nke asịrị banyere Samsung Galaxy S4 kwubiri na ọnụ ọgụgụ "4" bụ ihe ọjọọ chioma maka ike.
Egwuregwu kachasị mma na ngwa nke afọ
Ọ bụ ezie na ọ bụghị ndepụta gọọmentị dịka anyị nwere ike ịchọta na Storelọ Ahịa App yana ngwa ya kachasị mma na ...
Ndị na-emepụta ihe na-emepụta sensọ igwefoto HD ọhụrụ
Aptina bụ otu n'ime ndị na-emepụta igwefoto igwefoto igwefoto, ndị na-enye ndekọ vidiyo na 1080p na 60 fps mgbe ha na-ese foto n'otu oge.
Ihe onyonyo chaja maka Nexus 10 akpọrọ Pogo pụtara
Otu akụkọ na-adịbeghị anya kwuru banyere chaja magnet aha ya bụ pogo nke Samsung ga-emepe maka Nexus 10.
Google Maps na-egosi mbara ala n'abalị
Ọ bụrụ na ị chetụ n'echiche ihe obodo gị dị ka n'abalị site na mbara igwe, Google na NASA emeela ...
Samsung nwere ike iweta ama na ihuenyo AMOLED na-agbanwe agbanwe
Samsung nwere ike ịkwadebe ihe dị oke oke maka esote CES 2013. Onye Korea buru ibu nwere ike iweta ngwaọrụ nwere AMOLED ihuenyo.
Egwuregwu Onyinye (VI): «Mkpa Ọsọ: Kasị Achọrọ»
Oge nke asaa nke Onyinye Ego na-elekwasị anya ọzọ na ịnya ụgbọ ala, anyị na-enyocha Mkpa maka Ọsọ: A Kachasị Achọrọ.
Will gaghị enwe ike jikọọ ngwa na ọdụ ụgbọ USB nke Google Nexus 4
Otu akụkọ akụkọ na-adịbeghị anya kwuru banyere enweghị nkwekọrịta n'etiti ọdụ ụgbọ USB nke Google Nexus 4 na ngwa dị iche iche na ahịa.
Ngwa na-adọrọ mmasị na-egosi Flash Sony Xperia mobiles
Sony Xperia Arc, Xperia S na Xperia Arc S nwere ike ịmetụta ngwa ngwa nke ngwa ahụ kwadoro.
AnyGlove na-eme ka ọ dị mfe iji uwe aka na ihe mmetụ
AnyGlove bụ mmiri mmiri nke enwere ike itinye na mkpịsị aka aka nke gloves iji mee ihe ngebichi mkpanaka.
Sony na-eweta Xperia E dị ka ekwentị mkpanaaka dị ala na ahịa
Sony kpebiri ịbanye na Xperia E dị ka onye nnọchianya kwesịrị ekwesị nke teknụzụ ya dị ala na-etinye aka na mmefu ego dị ala.
A na-ahazi mmelite ọkara na ogologo oge maka ekwentị Sony Xperia
A ga - emelite ụdị dị iche iche nke ekwentị Sony Xperia na ICS ruo tupu njedebe nke 2013 yana jelii agwa na Q3 2013.
Samsung GT-I9525 nwere ike ịbụ akara mkpịsị aka mbụ nke gam akporo 5.0 a ga-eweta ozugbo
Otu asịrị na-adịbeghị anya kwuru banyere ịdị adị nke Samsung GT-I9525, ekwentị mkpanaaka nwere ike ịnwe gam akporo 5.0 na gburugburu ya.
Ejila Samsung Galaxy S3 ụdị dị iche iche na-ere na ọnụ ala dị ala
Ejila Samsung Galaxy S3 mee ihe n'ọmụmụ ahịa, ọ ga - ahụ na ọcha bụ otu n'ime ihe kachasị ọnụ.
5-anụ ọhịa zuru HD ihuenyo ọhụrụ LG Optimus G2 maka May 2013
LG Optimus G2 ga-amalite na Mee 2013 quad-core processor na oke ọsọ, sistemụ arụmọrụ ọhụrụ yana ihuenyo HD zuru ezu.
Enwere ike igosipụta mobile ndị ọhụrụ na ahịa
Ultra-mkpa mobiles nwere ike na-eru anyị aka na a obere oge, nke ga-na-adị gị mkpa nke 1 mm oké.
Iwe nnụnụ Star Wars nyochaa
Anyị na-ewetara gị nyocha anyị nke Nnụnnụ Ugbo Star Wars.
Smartphones na-agbanwe agbanwe, akụkọ sayensị ma ọ bụ eziokwu?
Paperphone na Snaplet abụọ na-agbanwe ama smartphone prototypes
Samsung Galaxy S4 asịrị na-amalite
Omume ndi nwere ike ichota bu Samsung Galaxy S4 yana uzo o gha eweputa n’aho mbu nke 2013.
Oghere Chineke, simulator dị na Kickstarter
You nwere mmasị na ụgbọ mmiri pụrụ iche? Science akụkọ ifo RPGs? Lelee Ohere Chineke
Ulochi Claystone, ihe ngosi 3D dị egwu
Ihe ngosi Claystone bụ 3D Launcher dị maka n'efu maka gam akporo na Playlọ Ahịa Play.
Samsung Galaxy S3 Mini gosipụtara ya
Samsung ewebatala Samsung Galaxy S3 Obere, smartphone nke nwere ihe nhazi abụọ ya na ihuenyo Super AMOLED nke anụ ọhịa anọ.
ZTE Grand X IN, ZTE na Intel sonyeere ndị agha
ZTE ka gosipụtara na IFA na Berlin na ZTE Grand X IN, ama ama ama nke na-eti ekele maka ihe nhazi Intel
Anyị na-elele ihe kachasị ọhụrụ na Egwuregwu Madfinger. Nwụrụ Anwụ na-akpali akpali bụ egwuregwu kwụ ọtọ na egwuregwu, enweghị atụ.
Intel chọpụtara na ndị na-arụ ọrụ multicore adịghị mma nke ọma maka gam akporo
Intel kwenyere na multi-isi processors wuru n'ime gam akporo smartphones na-adịghị mma kachasị.
ZTE Athena, slimmest smartphone si ZTE
A leaked oyiyi na-egosi anyị ZTE Athena, ọhụrụ ama si Chinese ụlọ ọrụ na-ji mara ya ebughibu imewe.
9 nde Samsung Galaxy S3 debeere
Izu abụọ ga-aga tupu mwepụta nke ọhụrụ Samsung Galaxy S2, ọ nwetalarị ị nweta nde mmadụ itoolu iji chekwaa ekwentị ya.
Pebble bụ elekere mara mma ị nwere ike ijikọ na Smartphone gị, ma ọ bụ gam akporo ma ọ bụ iOS, ọ nwekwara nnabata ngosi.
Mmiri ozuzo na-agwa gị ka ị were nche anwụ
Mmiri mkpu (Rain Alarm) na-agwa gị na gam akporo gị nke mmiri ozuzo na-abịakwute gị na ezigbo oge
Gam akporo na-eme kọfị (ihe na-efu)
Gam akporo na-eme kọfị ekele Zipwhip, nke mepụtara igwe na-akwadebe kọfị ị nyere iwu site na SMS
LG Cloud na-akpọrọ gị gaa n'ígwé ojii
LG Cloud na-echekwa faịlụ mgbasa ozi gị na igwe ojii iji rie ha na gam akporo gị, PC ma ọ bụ LG TV na nkwanye
Google Play ga-enye gị ohere ịkwụ ụgwọ maka ọrụ ọ bụla site na ụgwọ ekwentị kwa ọnwa
Google gbatịrị ọrụ Google Play, na-enye gị ohere ịmekọrịta ọrụ ọ bụla site na akwụkwọ ọnụahịa ndị ọrụ anyị.
Kpoo Samsung Galaxy S3 ohuru, ugbu a
E gosipụtara Samsung Galaxy S3 ọhụrụ na usoro ọrụ ọhụụ ọhụrụ maka onye ọrụ
Sony na-ahụta ọdịda na Sony Xperia S
Usersfọdụ ọrụ achọpụtawo na mgbe ha na-eji ekwentị intensively na ọ heats elu, manụ odo tụrụ egosi na ihuenyo nke ngwaọrụ.
LG Optimus L3, ama dị n'etiti ọnụahịa dị ọnụ ahịa mara mma
LG chọrọ ịwakpo ahịa maka smartphones dị n'etiti, yana ụzọ ka mma karịa igosi LG Optimus L3, bụ onye ama ama dị n'etiti, yana ọnụahịa mara mma nke ga-atọ ndị hụrụ gam akporo obi ụtọ.
Asus meriri n'agha megide Hasbro
Asus meriri Hasbro ikpe maka iji aha Transformer Prime na mbadamba ya
Ogwe Angry Angry bụ onye ọrụ ugbu a.
N'ime nkeji ọhụrụ a, nke ga-abụ egwuregwu ọhụụ na ọ bụghị mmụba, nnụnụ ndị a na-adọrọ adọrọ na-abanye na mbara igwe. Isiokwu nke egwuregwu ahụ bụ otu ihe ahụ dị ka mgbe niile, ị na-atụfu nnụnụ si slingshot na ị ga-akụ akwa-ezuru ezì. Naanị na Nnụnụ Nnụnnụ Angry anyị ga-anọ na mbara igwe, yabụ anyị ga-eburu n'uche ike ndọda na physics ya ọhụrụ. Ike ndọda ga-enye egwuregwu ahụ ọgụ. Anyị ga-ahụ asteroids na mbara ala ndị ike ndọda ha ga - eme ka nnụnụ anyị hapụ ụzọ ha ga - esi na - adọta ha, nnụnnụ, ezi na ihe niile dị na ntanetị.
Qualcomm Snapdragon GamePack ọnụ ụzọ egwuregwu ọhụụ
Egwuregwu ọhụrụ egwuregwu Qualcomm SnapdragonPack ga-ebido egwuregwu anọ ọhụụ, Virtua Tennis Challenge, Ọchịchị nke amira, The Reem, The Ball
LG weputara azịza ohuru maka ikuku ichikota ekwentị ya
LG gosipụtara ya n'izu a na MWC 2012 isi ikuku na-akwụ ụgwọ, ihe atụ ọhụrụ emere baptizim dịka CMR-800
Akwụkwọ Mantano. Nnukwu agụ akwụkwọ na pdf.
Na Ahịa anyị na-ahụ ọtụtụ ngwa na-arụ ọrụ dị ka akwụkwọ na ndị na-agụ akwụkwọ, mana ihe kachasị mma na nke zuru oke bụ doro anya: Mantano Reader. Mantano Reader bụ akwụkwọ dị ike na onye na-agụ akwụkwọ na-eweta ọtụtụ nhọrọ na ngwa ọrụ: Bugharịa mmụba ma belata ngbanwe akpaaka na ederede na ihuenyo. Ọ-enye gị ohere jikwaa faịlụ site na njikọ na a na aha njirimara na paswọọdụ iji chebe faịlụ. Ederede na okwu, gụọ site na otu ibe na faịlụ niile. Ederede ma ọ bụ ihe ngosi eserese. Ọ na-enye ohere itinye nkọwa, ibe edokọbara na gosi ederede. Na-enye gị ohere ịchọ ozi ma ọ bụ okwu n’akwụkwọ ọkọwa okwu ma ọ bụ na weebụ (Google, Wikipedia, wdg). Akwụkwọ ọkọwa okwu ahụ nwere ike ịntanetị ma ọ bụ budata iji nweta ha oge niile. Ọnọdụ abalị, maka ọgụgụ ka mma na obere ọkụ. Ọtụtụ nhọrọ na akụrụngwa.
Asịrị: Foto ọhụrụ Samsung smartphone maka Mobile World Congress. Foto adịgboroja?
Ihe onyonyo ohuru na abia n’igwe, chere na obu Samsung nke ikpeazu o gha egosiputa na Mobile World Congress na abia
Ozi maka ndị egwuregwu (I). Gwuo PSP na gam akporo?
Sony achọpụtala uto a na ụlọ ọrụ egwuregwu vidiyo. Ọ meelarị na ntọhapụ nke Xperia Play, na-ewebata echiche nke "console-phone" ma ugbu a ọ na-eme ya ọzọ. Ebe ọ bụ na, Sony ga-ahapụ ụdị nke egwuregwu PSP ya PS maka egwuregwu gam akporo ya niile.
G-Shock a Casio smartphone maka ezigbo ụmụ nwoke
Casio abanyela n'ime ụwa nke smartphones, mana yana akara dị iche, ha bụ igwe na-eguzogide ọgwụ.
Huawei na-ebupụta ama dị n'etiti: Huawei Honor
Huawei eweputala ama ozo ozo, oge a bu ihe kachasi nma ya, ya na smartphone di n'etiti na-enweghi ihe ndi ozo
Batrị na-adịgide ma na-adịgide ma na-adịgide ...
Ogologo oge ole ka batrị nke Smartphone gị ga-ewe? 12 awa ... 1 ụbọchị sonso? Otu ọghọm nke inwe Smartphone dị ike nke nwere ọtụtụ ojiji na akụrụngwa bụ oriri dị elu nke batrị ahụ. Ọ bụ ya mere na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị anyị nwere ike ịchọta ọnụ ọgụgụ buru ibu nke batrị ndị ọzọ maka Smartphone gam akporo anyị. Taa, m bịara ikwu banyere batrị nwere ikike kachasị elu nke achọtarala m.
Sony Ericsson Xperia Ray (na II) Nyochaa
Mgbe anyị nyochachara ihuenyo na ngwaike nke ọnụ ụbọchị ole na ole gara aga, taa anyị ga-ekwu maka ngwanrọ nke nke a.
Sony Ericsson Xperia Ray (I) Nyochaa
Ekele dịrị ụmụ nwoke na Sony Ericsson anyị enweela ike ịnwe Xperia Ray maka izu ole na ole, n'oge ...
Sony Tablet P: Sony na-ewepụta mbadamba nke abụọ ya maka UK
Sony Tablet P: Sony na-eweta maka United Kingdom, mbadamba nke abụọ ya, nke nwere usoro ọhụụ na nke mgbanwe, juru anyị anya na mbadamba dị iche
Adịkwa Christmas si Androidsis
Kedu ihe dị na mbụ, gam akporo ma ọ bụ IOS?
Ezigbo ndị nka na-ede akwụkwọ, ndị na-ese ihe dị egwu na-ezu ohi.
Samsung Galaxy Tab 10.1 Nyochaa (Nkebi nke Abụọ)
Nyochaa nke ngwanrọ ahụ gụnyere na Samsung Galaxy Tab 10.1.
DROID 4, Motorola Razr nwere keyboard QWERTY
N’ikpeazụ, ekpugherela onyonyo na nkọwapụta nke ọdụ ụgbọ ala Motorola kacha ọhụrụ.
Jorte, nzukọ dị mfe maka gam akporo gị
Na Jorte ị nwere ike ịhazi onwe gị n'ụzọ dị mfe ma rụọ ọrụ nke ọma na-ekele gị gam akporo mobile.
Chromebooks na-adị mfe inweta
Samsung lowers ọnụahịa nke Chromebooks ya n’emefughi ike niile nke Chrome OS.
Samsung Galaxy Tab 10.1 Nyochaa (Akụkụ Otu)
Samsung Galaxy Tab 10.1 mbadamba nyocha. Akụkụ 1 nke 3
Nnukwu nyocha Egwuregwu Little Little, agha na akpa gị
Otu n'ime ndị kasị mma ndịna-emeputa na funniest atụmatụ egwuregwu na gam akporo Market,
Ezigbo RPG dịkwa na gam akporo.
Gam akporo chere n’onye obula, ma ndi okenye anyi.
Gam akporo na-eche banyere onye ọ bụla, chọpụta otú!
Anyị nwalere ZTE Skate na ihuenyo 4,3-inch
Agbanyeghị na ọ dị n'ahịa maka ọnwa ole na ole, ZTE Skate ka gafere n'aka anyị na mmetụta ...
Adobe ga-akwụsị mmepe Adobe Flash
Adobe Flash ga-akwụsị itolite maka igwe mkpanaka
Nsogbu Naval, Egwuregwu-Nyocha
Nyochaa nke nsogbu Naval, mmiri nke ụgbọ mmiri ahụ maka gam akporo
Cloe, Onye na-enyere aka na Voice na Spanish
Onye enyemaka olu kacha mma na Spanish
EGO KWESTRR:: ZOMBIES, Game-Analysis
My nyochaa nke quintessential zombie egwuregwu.
FL Studio Abata na Ngwaọrụ gam akporo
Maka ndị hụrụ egwu ahụ n'anya, anyị nwere ozi karịrị akụkọ na-atọ ụtọ, mbata nke ngwa FL Studio maka ...
Google Takeout, ndabere nke ihe omuma gi
Google Takeout, nkowa, oru na uru ya
Samsung Galaxy SII vs IPhone 4S, ule ntachi obi
Ule nnwale dị n'etiti SGSSII na IPhone 4S
Sprint na-eweta Gingerbread na LG Optimus S, nke LG Optimus One
Sprint mmelite Gingerbread na nke ya nke LG Optimus One the Optimus S
Anyị nwalere LG Optimus 3D (III)
LG Optimus 3D ule
Anyị nwalere LG Optimus 3D (II)
Samsung Galaxy S Wifi 5.0 (III) ule
Akụkụ nke atọ nke Nyocha nke Galaxy S Player na gam akporo 2.2
Samsung Galaxy S Wifi 5.0 (II) ule
Akụkụ nke abụọ nke Galaxy S Player WiFi 5.0 nyochaa
LG Optimus Black (II) nyochaa
Mgbe akụkụ mbụ nke anyị na-ekwu maka akụkụ anụ ahụ nke ngwụcha, ngwaike na akụrụngwa, na nke a ...
LG Optimus 3D: atụmatụ ya
LG Optimus 3D: atụmatụ ya.
Nwelite Skype na Oku vidiyo maka gam akporo
Nwelite Skype maka gam akporo na oku vidiyo
Huawei MediaPad, mbadamba nkume ọhụrụ na gam akporo Honeycomb na processor abụọ
Huawei MediaPad, mbadamba nkume ọhụrụ na mmanụ aeyụ gam akporo na processor abụọ.
Orange Barcelona: Otu gam akporo ama na ihuenyo mmetụ aka na nkịtị ahụ
Orange Barcelona: Otu gam akporo ama na ihuenyo mmetụ aka na nkịtị ahụ.
Nyocha 2 LG Optimus 2x (III)
Akụkụ nke atọ nke nyocha nke LG Optimus 2x
LG Optimus Pad rutere na Spain naanị Vodafone.
LG Optimus Pad rutere na Spain naanị Vodafone. Enyere ndị mmadụ aka, ndị nwe onwe ha na ụlọ ọrụ ha.
Mbadamba Arnova 7 na Arnova 84 rutere ụlọ ahịa na mmefu ego niile.
N'oge na-adịghị anya, ha ga-enweta na RRP nke € 99 na € 129, n'otu n'otu, El Corte Inglés, MediaMarkt, Saturn, The Phone House, Eroski, Leclerc na Pixmanía na Spain.
Ajụjụ ọnụ na @ignacio_gs
Ajụjụ ọnụ nke gam akporo devel @ignacio_gs
Gwuo naanị egwuregwu Tegra Mpaghara na gam akporo gị
Chainfire 3D ga-agba Tegra Nvidia Mpaghara egwuregwu n'efu na gam akporo
Android na-azacha ahịa
Nchịkọta na nyocha nke ahịa ekwentị na nkeji iri na ise nke 2011
New Vodafone 858 Smart Terminal, gam akporo "White Label".
Vodafone webatara ọnụahịa, "akara ngosi ọcha" gam akporo.
Ule nke HTC Desire S (III)
Nyochaa nke HTC Desire S na Spanish